किर्ते ‘केपी बा’ तर्क अनेकन गर्नुहोस् तर, संसद विघटन जनविरोधी कदम नै हो - किर्ते ‘केपी बा’ तर्क अनेकन गर्नुहोस् तर, संसद विघटन जनविरोधी कदम नै हो -
किर्ते ‘केपी बा’ तर्क अनेकन गर्नुहोस् तर, संसद विघटन जनविरोधी कदम नै हो
मिन बहादुर सुनुवार ‘सुमन’ २७ माघ २०७७, मंगलवार
एकजमानामा अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले झण्डै १ सय ५० वर्ष अगाडि भनेका थिए लोकतन्त्र भनेको ‘जनताको निम्ति जनताद्वारा जनताले निर्माण गरेको सरकार हो ।’ आज तिनै अब्राहम लिङ्कन भौतिक रुपमा यो दुनियाँमा त छैनन्, तर उहाँले व्यक्त गरेको त्यो लोकतन्त्रको परिभाषा आजसम्म जिउँदै छ । र भविष्यमा पनि मानव सभ्यता रहेसम्म कालजयी भएर त्यो पङ्क्ती रहिरहेने छ । किनभने त्यो बखत अमेरिका चरम जातीय( प्रजातीय विभेद, गरिबी, बेरोजगार अनि पछौटेपनले उकुसमुकुस भएको थियो । अमेरिकन जनताको तिर्खाएकोआँतलाई न्याय र समानताले मेटाउन सकेको थिएन ।
त्यसकारण, जनताको मर्न लागेको विश्वासलाई भित्रबाट नै हौसला अनि आशाको उर्जा भर्नका लागि उहाँले अब ‘जनताको सरकारको युग’ प्रारम्भ भयो भन्ने उदघोस त्यो बेला गरेका थिए । र, संसार भरिका बादसाह अनि शासकलाई जनताको तागतले सत्ताबाट ढाल्दै लोकतन्त्रको लहर जताततै चल्यो ।एकपछि अर्को राष्ट्रमा लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रले अभुतपूर्व विजय प्राप्त गर्दै गयो । समयको गतिसँगै यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अनेकन राजनीतिक आरोह-अवरोह र अड्चनहरु पार गर्दै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । जनताको भाग्य र भविष्यलाई साकार पार्न सकिने र राष्ट्रको समृद्धि गरिछाड्ने संकल्पित नेपाली जनताको सार्वभौम संसदको जन्म भयो ।
तर झन्डै ७० वर्ष भन्दा लामो संघर्ष, आन्दोलन र दश वर्षको जनयुद्धको जगमा निर्माण भएको संविधान, जुन संविधानले पहिलोपटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ। जुन संविधानले जनताको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ । त्यसको अटुट रुपमा रक्षा गरेको छ । आज चौपालमा त्यहीँ संविधानको खुलेआम हत्या गरिएको छ । यसरी हत्या गर्ने पात्र अरु कोहि होइन, आफुलाई जिन्दगीभर राजनिती गरेको एउटा भुक्तभोगी भन्न रुचाउने अनि झन्डै दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ‘केपी बा’ हुन् । ‘केपी बा’ले पुष ५ गते नेपाली जनताको सार्वभौम संसद विघटन गरिदिए । संविधानले एक्कासि संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, तर कृते महावली ‘केपी बाुको अगाडि संसद र संविधान र लोकतन्त्र निकम्मा भए । उहाँले कठैबरी जनताको नासो अथवा सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रलाई दिनदहाडै कत्लेआम गरिदिए ।
तसर्थ, लिङ्कनले उबेलामा लोकतन्त्र भनेको जनताको सरकार, जसलाई संविधान मार्फत बचाउनु पर्छ भनेका थिए । र, यसबाट सम्पूर्ण जनताले प्रशस्त लाभ लिनसकोस भन्ने उनको उदेश्य थियो । तर, लिङ्कनको ठिक उल्टो बुद्धि भएको ुकेपी बाुले मेरो सरकार जनताको सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार । गरिब अनि निमुखाहरुको सरकार । कम्युनिष्टको सरकार भनेको होइन र रु आज तिनै व्यक्तिले निर्दोष नेपाली जनताको लोकतन्त्रको चिरहरण गरे। जनताको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने संसद भंग गरे ।
आखिर जनताले के गल्ती गरेको थियो र ?
संसद विघटन गरेको ? पार्टी भित्रको किचलो र संघर्षको कारण देशलाई नै बर्बाद बनाउन मिल्छ ? घरमा झगडा भयो भन्दैमा घरमा नै आगो लगाउन मिल्छ ? कृते केपी बा को आरोप छ । यो पदको झगडा हो । मलाई कतैकाम गर्न दिएनन् भन्ने अनि उहाँ आफै कुर्सीमा टासिरहने । उहाँको यो मजाक देशले कहिलेसम्म झेल्ने ? पक्कै पनि देश यो हालतमा आउन र जनताले दुःख पाउने स्थिति बन्नुमा सबै नेतृत्वको धेरै थोरै भूमिका होलान् । पानी माथिको ओभानो कोहि पनि नहोलान । तर, नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री अनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले नै संसद विघटन गरे । चार दशक राजनीतिक अनुभव सङ्गालेको व्यक्ति हुँ भन्नेले यस्तो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ‘कू’ गर्न मिल्छ ? त्यसकारण, यो नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । उहाँ नै सबैभन्दा ठूलो अपराधी हुन् । दोषी हुन् ।
तसर्थ, एउटा व्यक्तिवादी सोच भएको, संकी र जाली झेली व्यक्ति, जसले प्रतिगमन कदम चालेका छन् । यसको विरुद्धमा सचेत नागरिक अनि आलोचनात्मक सोच भएका तमाम व्यक्तिहरु एकजुट हौं । किनभने कृते केपी बाले जनताको बीचमा सद्भाव र एकता होइन, नैरसता र फुट मात्र ल्याए। अनि नेतृत्व त वैचारिक रुपले अनि सैद्धान्तिक रुपले खारिएको हुनुपर्छ । पार्टीको विचार, नीति अनि सिद्धान्तले समाजमा तरंग र गतिशीलता पैदा गर्ने खाल्को हुनुपर्छ । तर केपी बा जताततै ठट्टा र उखान टुक्का मात्र भन्दै मान्छे हसाउदै हुनुहुन्छ । हुन त जो जे कुरामा पोख्त छ उसले त्यहीँ नै गर्ने हो । संकी सोच र कमेडी प्रहसनले नेपाली जनताको भविष्य सुन्दर कदापि बन्दैन ।
कृते बाको प्रतिगमन कदमले आज सबै राजनीतिक सामाजिक उपलब्धिहरु धरापमा छन् । सरकार पक्षको वकिलले अदालतमा संघीयता र गणतन्त्रलाई नै यो संविधानले खारेज गर्न सक्छ भन्ने कुतर्क गर्दै छन् । आज सात दशकको राजनीतिक संघर्ष, जनान्दोलन, जनयुद्ध र बलिदानबाट प्राप्त सार्वभौम नेपाली जनताको संविधानले प्रवधान गरेको संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक र धर्म निरपेक्ष जस्ता गम्भीर संबैधानिक मुल्य मान्यताहरुमा कथित केपी बा र उहाँको गुट्ले एक पछि अर्को प्रहार गर्दैछन् ।
तसर्थ, जाली झेलीहरुका यी तमाम प्रतिगमनलाई रोक्न र यिनीहरुको कथित सेटिङलाई तोड्न सम्पुर्ण नेपाली जनता, नागरिक समाज, अभियानता, बुद्धिजिवि, शिक्षक, पत्रकार सबै एकढिक्का हुन आवश्यक छ । कृते बाको बकम्फुस्रे ठ्ट्टा र मजाकमा आलोचनात्मक सोच भएका व्यक्ति कदापि भुल्नु हुन्न । बरु असंवैधानिक ुकूु को विरुद्धमा धावा बोलौ । आँधिहुरी ल्याउ र प्रतिगमनकारी ओलिवादलाई परास्त गरौं । तर म नै शासक, म नै सरकार अनि म नै राज्य ठानेर जताततै मेरो बलियो सेटिङ छ भन्दै जनताको आन्दोलनलाई निर्ममता पुर्वक दमन गरेमा, हत्या र हिंसा गरेमा, त्यहाँ जनताको प्रतिरोध हुनेछ ।
अनि याद रहोस् अन्ततः जसरी नाजीवाद र गदाफीतन्त्रको नामेट भयो, त्यहीँ हालत कृते ओलितन्त्रको हुनेछ । यहाँ के कुरा नभुलौं भने हिटलर, मुसोलेनी, गदाफी र ज्ञानेन्द्रको पनि आफ्नो शक्तिशाली सेना र आफुलाई साथ दिने जनताको थामी नसक्नु भिड थियो । तर, इतिहास साची छ, ती निरंकुश शासकले नमिठो हार मात्र भोग्नु परेन, मर्नु र मारिनु नै पर्यो । तसर्थ, कृते केपी बा तपाइँ अनेकन तर्क गर्नुहोस् तर तपाइँको संसद विघटन सोर्‍ह आना नै जनविरोधी कदम हो । आशा गरौं बेलैमा बुद्धि फिरोस । एउटा झुण्ड्को मात्र बा हैन सम्पूर्ण नेपालीको बा बन्ने सोच राख्नुहोस । तर किमार्थ ओलितन्त्रलाई ओलिगार्चीमा बद्लिएर त्यो तानाशाहको पथमा अगाडि नबड्नुहोस। किनभने त्यो सिर्जना र शान्तिको बाटो होइन, निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ त्यो विनाशको पथ हो ।